ESI TINYE LIGHTROOM - ADOBE LIGHTROOM - 2019
Isi Adobe Lightroom
Adobe Lightroom - esi esi wụnye onye nchịkọta akụkọ na-ewu ewu
Ọtụtụ ndị ọrụ kọmputa na-eji oge ha oge na-eme nchọgharị, na-eji ya maka azụmahịa ma ọ bụ atụmatụ ọrụ. Dị ka ọ dị, ihe a dị oké mkpa maka ndị na-awakpo ndị ga-anwa ime ihe nile iji tinye ihe nchọgharị weebụ nke onye ọrụ, na site na ya kọmputa n'onwe ya. Ọ bụrụ na i chee na nke a emeela na Internet Explorer gị, oge eruola iji chọpụta ya.
Lelee ihe nchọgharị gi maka nje
Enweghị ụdị ọrịa, nke onye ọrụ ahụ ga-abanye ma kpochapụ malware. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ụdị virus dị iche iche, ị ghaghị ịlele ọtụtụ dị mma maka ọrịa. Ka anyị nyochaa nhọrọ ndị dị mkpa dị na etu esi esi wakpo ihe nchọgharị ahụ.
Nkeji nke 1: Lelee maka ndị na-egwuputa ihe
Ọ bụghị afọ mbụ na ụdị koodu ọjọọ nke na-arụ ọrụ dị ka onye na-egwuputa ihe dị mkpa. Otú ọ dị, ọ na-arụ ọrụ, ọ bụghị gị, kama ọ bụ onye ji koodu a megide gị. Ngwuputa bu usoro nke ntinye ihe ntinye anya, nke gunyere ike ichikota kaadị vidiyo. Ndị na-eme nke a na-ejikarị kaadị vidiyo nke ha, bụ nke ha na-emepụta "ugbo" dum (ijikọta ụdị akara ngosi vidiyo kachasị ike), na-agba ọsọ ntinye uru. Ọ bụghị ndị kasị eme ihe n'eziokwu ha na-ekpebi ịga n'ụzọ dị mfe karị, n'ejighị ego buru ibu iji zụta ngwá ọrụ ma kwụọ ụgwọ ọkụ eletrik ndị a kaadị na-eri n'oge ọnwa ahụ. Ha na-etinye kọmputa nke ndị na-amaghị ihe na Intanet site n'ịgbakwunye saịtị ahụ.
Usoro a yiri ka ị gara na saịtị ahụ (ọ nwere ike ịbụ ihe ọmụma ma ọ bụ ihe efu, dị ka à ga-asị na ahapụre ya ma ọ bụ na emeghị ya), ma n'eziokwu, ị ga-ahụkarị nsị. Ọtụtụ mgbe, ọ na-enweghị ngwọta, kọmputa ahụ amalitelatalata, nke a na-akwụsị ma ọ bụrụ na ị mechie tab. Otú ọ dị, nhọrọ a abụghị nanị ihe ga-esi na ya pụta. Nkwenye ọzọ nke nbịbịa nke onye na-egwuputa ihe nwere ike ịbụ ọdịdị nke teepu ntanetị na nkuku ihuenyo ahụ, gbasaa nke ị nwere ike ịhụ akwụkwọ na-enweghị ihe efu na saịtị na-amaghị. Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nwere ike ọ gaghịdị achọpụta na ọ na - agba ọsọ - maka nke ahụ, n'eziokwu, ngụkọta dum. Ogologo oge a na-ebido taabụ ahụ, ihe ka onye nchịkọta ihe natara n'aka onye ọrụ ahụ.
Ya mere, otu esi achọpụta na ọnụnọ nke onye na-egwuputa ihe na nchọgharị?
Lelee ọrụ weebụ
Ndị mmepe Opera kere usoro Wụnye Cryptojacking weebụ, nke nyochaa maka ọnụnọ nke ndị na-egwupụta ihe nzuzo n'ime ihe nchọgharị ahụ. Ị nwere ike iji ya na iji ihe nchọgharị weebụ ọ bụla.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Cryptojacking Test
Pịa njikọ n'elu wee pịa bọtịnụ ahụ. "Malite".
Chere maka mmecha usoro ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị ị ga-enweta nsonaazụ gbasara steeti ihe nchọgharị ahụ. Mgbe igosipụta ọnọdụ "EGBEGHỊ EZI" a choro ime ihe ntuziaka iji dozie ọnọdụ. Otú ọ dị, a ghaghị iburu n'uche na ị nweghị ike ịdabere na arụmọrụ nke a na ọrụ ndị yiri ya na 100%. Maka obi ike zuru ezu, a na-atụ aro ka ị rụọ ọrụ ndị a kọwara n'okpuru ebe a.
Lelee ihe nchọgharị weebụ Njikwa Task ma chọpụta ole ntanetị na-eri.
Nchọgharị na Chromium (Google Chrome, Vivaldi, Yandex Nchọgharị, wdg) - "NchNhr" > "Ngwaọrụ ndị ọzọ" > Njikwa Task (ma ọ bụ pịa igodo ọnụ Ịgbanwe + Esc).
Firefox - "NchNhr" > "More" > Njikwa Task (ma ọ bụ tinyebanyere: arụmọrụna ebe adreesị na pịa Tinye).
Ọ bụrụ na ị hụ na a na-eji ụfọdụ taabụ ihe eji eme ihe dị ukwuu (nke a na-ahụ anya na kọlụm "CPU" na chromium na "Eji Ike" na Firefox) dịka ọmụmaatụ 100-200ọ bụ ezie na nke a bụ nkịtị 0-3, mgbe nsogbu ahụ dị.
Anyị na-agbakọ nsogbu taabụ, mechi ya ma agakwaghị aga na saịtị a.
Ọ bụghị mgbe niile ka saịtị ahụ ga - ejide ya: ọ nwere ike ịbụ na ntinye arụnyere. Ma ị gaghị ama mgbe niile na ọ na-arụ ọrụ ma ọlị. Enwere ike ịmata ya n'otu ụzọ ahụ dị ka taabụ na onye na-egwuputa ihe. Naanị na Njikwa Task Oge a, lee ndepụta nke taabụ, mana nkwụnye ọsọ - a na-egosikwa ha dị ka usoro. Na Chrome na ndị ogbo ya, ha yiri nke a:
Firefox na-eji ụdị maka ha. "Mgbakwunye":
Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe nile ka a ga-eme ka nsị na-arụ ọrụ n'oge ị na-ele anya Njikwa Task. Gaa na listi nke tinye-ons ma tinye ndepụta ha.
Chromium: "NchNhr" > "Ngwaọrụ ndị ọzọ" > "Ọpụpụ".
Firefox - "NchNhr" > "Add-ons" (ma ọ bụ pịa Ctrl + Shift + A).
Chọgharịa site na ndepụta ndọtị. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-enyo enyo na ị ma wụnyebeghị, maọbụ naanị atụkwasịghị ya obi, wepụ ya.
Ọbụna n'okpuru ọnọdụ na enweghị onye ọrụ ntinye n'ebe ahụ, nje ndị ọzọ nwere ike na-ezo na mpụga ndị a ma ama, dịka ọmụmaatụ, ịzụta data njirimara site na akaụntụ.
Nkeji nke 2: Nkwenye aha
Ọdịdị nke ụzọ mkpirisi nchọgharị (na usoro ọ bụla ọzọ) na-enye gị ohere ịgbakwunye akụkụ ụfọdụ nke mbido ihe eji eme ya. A na-ejikarị eme nke a iji gbasaa ọrụ ma ọ bụ nsogbu nsogbu dịka igosipụta ọdịnaya, ma ndị na-awakpo nwere ike ịgbakwunye ikike nke faịlụ na-arụ ọrụ ọjọọ nke echekwara na PC gị dịka BAT, wdg. Ọdịiche nke mgbanwe mgbanwe nwere ike ịbụ ihe akaebe ọ bụla, nke a na-eji egosipụta mgbasa ozi mgbasa ozi.
Pịa ụzọ mkpirisi nchọgharị na bọtịnụ òké aka nri ma họrọ "Njirimara".
Na taabụ "Aha" chọta ubi "Ihe", lee akara na njedebe - ọ ga-ejedebe na otu n'ime nhọrọ ndị a: firefox.exe "/ chrome.exe" / opera.exe "/ browser.exe" (na Yandex Browser).
Ọ bụrụ na ị jiri njikwa ihe nchọgharị na profaịlụ, na njedebe a ga-enwe àgwà dị ka nke a:--profile-directory = "Default".
Mgbe ị gbalịrị ịgbanwe ihe nchọgharị ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ mmegiderịta na ihe atụ n'elu. Dịka ọmụmaatụ, kama chrome.exe, ihe dịka ihe ị na-ahụ na nseta ihuenyo n'okpuru a ga-ede. Ụzọ kachasị mfe bụ iwepu ụzọ mkpirisi a ma mepụta otu ọhụụ. Iji mee nke a, ị ga-aga na folda ebe echekwara faịlụ EXE, ma mepụta ụzọ dị mkpirikpi site na ya n'onwe gị.
Dịka iwu, na ihe onwunwe nke ụzọ mkpirisi "Nchekwa nchekwa" ziri ezi, ya mere, ị nwere ike iji ya na-achọ ngwa ngwa nchọgharị.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike pịa "Njikwa ebe"iji gaa ngwa ngwa, ma nyere ya na faịlụ adịgboroja dị na nchekwa nchekwa nke ihe nchọgharị (ị nwere ike ịchọpụta ya na "Ihe").
A na-ehichapụ faịlụ ahụ gbanwere, ma site na faịlụ EXE anyị mepụtara ụzọ dị mkpirikpi. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ òké ahụ na pịa ya Mepụta Label.
Ọ na-anọgide na-akpọgharị ya ma dọrọ ya gaa n'otu ebe ebe akara akara mbụ dị.
Ọ bụrụ na ụzọ adịghị mkpa, ịnwere ike ịmepụta ihe nchọgharị ma pinye ya na ọrụ ọrụ.
Nkeji 3: Nyochaa Kọmputa
Ọ bụ iwu na ị ga-enyocha kọmputa maka ọ bụghị nanị nje, kama ọ bụ naanị ngwa achọghị, nke ihe nchọgharị ahụ masịrị ide n'ụdị ngwá ọrụ, ihe nchọgharị weebụ, ọkọlọtọ, wdg. Ndị mmepe dị iche iche mepụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ n'otu oge na ịchọpụta software obi ọjọọ, na-amanye, dịka ọmụmaatụ, iji dochie engines ọchụchọ, mepee ihe nchọgharị ahụ n'onwe ha, gosipụta mgbasa ozi na teabụ ọhụrụ ma ọ bụ n'akụkụ nkuku. Na ndepụta nke ngwọta dị otú ahụ na nkuzi maka ojiji ha, yana ozi gbasara idozi nsogbu nke ihe nchọgharị weebụ na-emepe mgbe ọ bụla ị chọrọ, ị nwere ike ịgụ isiokwu dị na njikọ n'okpuru.
Usoro mmemme maka iwepu mgbasa ozi na ihe nchọgharị
Na-alụso nje virus mgbasa ozi ọgụ
Nkeji 4: nhicha ndị agha
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-echefu ilebanye anya na ngwá ọrụ nke na-achịkwa ohere ịbanye na saịtị ụfọdụ. A na-agbakwụnye saịtị ndị e mesịrị na-eme nchọgharị na imegide ọchịchọ nke onye ahụ na faịlụ ndị agha. Usoro nhicha dị mfe; iji mee nke a, chọta na mezue mgbanwe faịlụ site na iji ntụziaka ndị a.
Gụkwuo: Gbanwee faịlụ ndị agha na Windows
Ịkwesịrị ịkpọbata ndị agha ahụ n'otu ala ahụ dị ka nseta ihuenyo nke isiokwu ahụ na njikọ dị n'elu. Tụlee ụfọdụ nuances:
Ihe kachasị njọ na-agbakwụnye na saịtị ruo na ala nke akwụkwọ ahụ, na-ahapụ ebe a na-ahụ anya efu. Jide n'aka ịhụ ma enwere akwụkwọ mpịakọta n'akụkụ aka nri nke akwụkwọ ahụ.
N'ọdịnihu, akwụkwọ ahụ nwere ike gbanwee ngwa ngwa nye onye ọ bụla na-eme ihe nchịkọta, yabụ, nhọrọ dị mma ga-abụ ka ọ gụọ ya (naanị site na ndị agha> "Njirimara" > Naanị gụọ).
Nzọụkwụ 5: Lee ndepụta nke mmemme arụnyere
A naghị akọwa ụfọdụ mmemme dịka adware ma ọ bụ achọghị, ma n'eziokwu bụ ndị dị otú ahụ maka onye ọrụ. Ya mere, jiri nlezianya nyochaa ndepụta nke ngwanrọ arụnyere, ma ọ bụrụ na ị hụ ngwa na-amaghị nke ị wụnyeghị, chọpụta ihe ọ pụtara. Mmemme na utu aha na mmụọ nke "Chọọ", "Toolbar" ma kwesiri ka ehichapụ ya n'egbughị oge. Ha ga-abughi uru.
Hụkwa: Ụzọ iji wepu mmemme na Windows 7 / Windows 10
Anyị enyochala ụzọ ndị bụ isi nke ịlele na ihichapu ihe nchọgharị ahụ site na nje. N'ime ọtụtụ ndị ikpe, ha na-enyere aka ma chọpụta ọrịa, ma ọ bụ iji jide n'aka na ọ dịghị adị. Ka o sina dị, nje nwere ike ịnọdụ na cache ihe nchọgharị ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịlele ya maka ịdị ọcha ma ọ bụghị site na ịchọta nchekwa na cache na antivirus. Maka mgbochi ma ọ bụ mgbe ị na-ebudata nje virus na mberede, a na-akwado ya ka ị hichaa oghere. Nke a dị mfe iji isiokwu na-esonụ.
Gụkwuo: Na-ehichapụ oghere n'ime ihe nchọgharị ahụ
Mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi enyere ọ bụghị naanị iwepụ ihe nchọgharị nchọgharị, kamakwa igbochi omume mkpasu iwe nke saịtị ụfọdụ na redirect na ibe ndị ọzọ nwere ike ịbụ obi ọjọọ. Anyị na-akwado ịmalite mkpọchi, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ọzọ.
Ọ bụrụ na, ọbụlagodi mgbe niile nyochaa, ị hụrụ na ihe na-eme na kọmpụta ahụ, o yikarịrị ka nje ahụ adịghị na ihe nchọgharị, mana na sistemụ arụmọrụ n'onwe ya, na-achịkwa ya, gụnyere ya. Jide n'aka na i nyochaa komputa dum site na iji ntuziaka sitere n'aka onye ndu n'okpuru.
Gụkwuo: Ịlụ ọgụ kọmputa
https://termotools.com ig.termotools.com © Adobe Lightroom 2019